တိုငျးရငျးသားပါတီတှဟော အဖွညျ့ခံတှလေား ? – Voice of Myanmar
စဈတှေ၊ အောကျတိုဘာ ၂၄- ၂၀၂၀
“တပါတီတညျးက အနိုငျရဖို့ လိုတယျဆိုတဲ့ အပွုအမှု၊ အပွောအဆိုတှကွေားမှာ ကမြတို့ရဲ့ပွညျထောငျစုထဲက တိုငျးရငျးသားပါတီတှဟော အိမျဖွညျ့သဘောမြိုးလို အရောငျပွသဘောမြိုလား”
လာမယျ့ ၂၀၂၀ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနရှေ့ေးကောကျပှဲမှာ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျးက မွို့နယျ (၉) ခုလုံးအပါအဝငျ ပွညျနယျအလယျပိုငျးနဲ့ တောငျပိုငျးက ရပျကှကျ (၁၅) ခုနဲ့ ကြေးရှာအုပျစုပေါငျး (၁၃၇) အုပျစုကို ရှေးကောကျပှဲကငျြးပ ပွုလုပျနိုငျတော့မှာ မဟုတျကွောငျး ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျက ထုတျပွနျခဲ့တဲ့အပျေါ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ မူဝါဒရေးရာဦးဆောငျကျောမတီဝငျ ဒျေါအေးနုစိနျ ကို VOM ကမေးမွနျးစဉျပွောဆိုခဲ့တာပါ။
လာမယျ့ ရှေးကောကျပှဲမှာ ရခိုငျပွညျနယျတောငျပိုငျးနဲ့ အလယျပိုငျးမွို့နယျတှမှောသာ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပနိုငျမှာဖွဈပွီး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီအနနေဲ့ ဂုဏျသိက်ခရှိရှိနဲ့ ယှဉျပွိုငျအနိုငျရလိုကွောငျး ဒျေါအေးနုစိနျက ဆိုပါတယျ။
ဒီအကွောငျးအရာတှအေပါအဝငျ ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ စဈရေးပဋိပက်ခနဲ့ တညျငွိမျအေးခမျြးရေးအပါအဝငျ လကျရှိဖွဈပှားနတေဲ့ နိုငျငံရေးပွဿနာကို နိုငျငံရေးနညျးနဲ့ အဖွရှောကွဖို့ကိုလညျး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ (ANP) ပါတီ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဒျေါအေးနုစိနျက တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ဘာသာပေါငျးစုံအတူနထေိုငျရေးအတှကျ (ANP) ပါတီရဲ့ သဘောထားအမွငျနဲ့ လာမယျ့ရှေးကောကျပှဲမှာ ပွညျသူသို့ ပေးခငျြတဲ့ သတငျးစကားတှအေပါအဝငျ သုံးသပျခကျြအသေးစိပျကို VOM သတငျးထောကျ ထကျအောငျစိုငျးက ဒျေါအေးနုစိတျကို လူတှမေ့ေးမွနျးထားတဲ့ ရုပျသံမေးမွနျးခကျြကို ကွညျ့ရှုနားဆငျနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ #ဒျေါအေးနုစိနျဓါတျပုံ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ(စဈတှေ)
တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ အဖြည့်ခံတွေလား ?
စစ်တွေ၊ အောက်တိုဘာ ၂၄- ၂၀၂၀
“တပါတီတည်းက အနိုင်ရဖို့ လိုတယ်ဆိုတဲ့ အပြုအမှု၊ အပြောအဆိုတွေကြားမှာ ကျမတို့ရဲ့ပြည်ထောင်စုထဲက တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဟာ အိမ်ဖြည့်သဘောမျိုးလို အရောင်ပြသဘောမျိုလား”
လာမယ့် ၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက မြို့နယ် (၉) ခုလုံးအပါအဝင် ပြည်နယ်အလယ်ပိုင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းက ရပ်ကွက် (၁၅) ခုနဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၁၃၇) အုပ်စုကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပ ပြုလုပ်နိုင်တော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပေါ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မူဝါဒရေးရာဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ဒေါ်အေးနုစိန် ကို VOM ကမေးမြန်းစဉ်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ အလယ်ပိုင်းမြို့နယ်တွေမှာသာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရခိုင်အမျိုးသားပါတီအနေနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခရှိရှိနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ရလိုကြောင်း ဒေါ်အေးနုစိန်က ဆိုပါတယ်။
ဒီအကြောင်းအရာတွေအပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအပါအဝင် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ အဖြေရှာကြဖို့ကိုလည်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ (ANP) ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါ်အေးနုစိန်က တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဘာသာပေါင်းစုံအတူနေထိုင်ရေးအတွက် (ANP) ပါတီရဲ့ သဘောထားအမြင်နဲ့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြည်သူသို့ ပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားတွေအပါအဝင် သုံးသပ်ချက်အသေးစိပ်ကို VOM သတင်းထောက် ထက်အောင်စိုင်းက ဒေါ်အေးနုစိတ်ကို လူတွေ့မေးမြန်းထားတဲ့ ရုပ်သံမေးမြန်းချက်ကို ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ #ဒေါ်အေးနုစိန
Election, Interview, ဓာတျပုံ ဗီဒီယို, ပါတီမိတျဆကျ